Doorka Shirkada Soma Gas iyo Kulamadda Xasan Kheyre ee New York – XAMAR POST
Shirkada Soma Oil & Gaas ayaa waxa ay u direen wafdi balaaran magaladda New York kuwaas oo u ololalwynayo Ra’isal Wasaare kheyre in uu kulamo la yeesho ganacsato iyo madaxda dowladda Ruushka. Shirkii Kheyre ee Wasiirka Arimaha Dibadda ee Ruushka waxaa soo qaban qaabisay goob joogna ka ahaa shirkadda Soma Gas.
Sida aan la wada socono shirkadda Soma Gas oo lagu dhacayo hantida umadda Soomaaliyeed ayaa waxa saamiga dhaqaale ee ugu badan leh shirkado iyo shaqsiyaad ruush ah. Waxaana shirkadaan saami ku leh islamarkaana shirko ka ah Xassan Kheyre.
Richard Anderson Madaxda shirkadda Eurasia Drilling Company isla Markana ah Agaasimaha Soma Gas iyo Mr Basil Shiblaq gudoomiye ku Xigeenka Soma Gas ayaa goob joog ka ahaa Shirarka dowladda Soomaaliya la yeelatay shirkado iyo dowlado.
Waa maxay sababta keentay in ay Shirarka dowladda Soomaaliye ay shirkadaha gaarka ah ay ka qaybgalaan. Maxaase keenay in ay Soma Gaas ay u qaban qaabinyaan wafdiga Soomaaliya Shirar Gooni Gooni ah.
Xassan kheyre iyo xukumadiisu waxa ay isugu soo arurtay lacag aruursi iyo beecinta hantida qaranka. Waxaa wax lala yaabo noqotay in Shirarka qaar laga qarsaday wafdiga la socday Kheyre oo ay ku jiraan wasiiro.
Jawaari oo u digay xildhibaanada aada safarada aanan laga war heyn